Kpoo chaja ikuku na eriri na-ebunye eriri na ụlọ ọrụ | Otu
Igwe chaja magnetik na eriri
15W ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ
A na-ahazi chaja D467 Magnetik Ikuku maka magnetik usoro nke usoro iPhone 12, 12pcs wuru n'ime magnet siri ike, ọrụ adsorption siri ike na-enye gị ohere ịhazigharị akụkụ ahụ kpamkpam na-enweghị isi na chaja.
Igwe na-arụ ọrụ magburu onwe ya na-eme ka chaja anyị dị ma na-egbochi mmịfe. Debe ekwentị mkpanaaka gị na etiti chaja maka nsonaazụ kacha mma.
Site na ọkọlọtọ dị mma nke Qi, chaja Magnetik na-akwado atụmatụ ikike mmepụta 4: 5W / 7.5W / 10W / 15W, Ọ ga-agbanwe ngwa ngwa na ikike nrụpụta dị iche iche dịka akara ekwentị iji hụ ngwa ngwa na nchekwa nke ngwaọrụ gị.
Ihe magnetik kachasị nke 15W na-enye ohere, nke mere na ekwentị gị nwere ike kwekọọ n'ụzọ ziri ezi na eriri igwe na-etinye ya na mpempe akwụkwọ iji nweta ngwa ngwa na nkwụsi ike karị. Na teknụzụ nchebe nwere ọgụgụ isi zuru oke, ọ na-enye ọrụ dịka njikwa okpomọkụ, nchekwa ọkụ na nchedo ugbu a, nchedo mkpirikpi dị mkpirikpi, na nchọpụta ahụ nke mba ọzọ.
Chaja magnet a dakọtara na iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max yana dakọtara na okwu ekwentị MagSafe na ụdị AirPods nwere ikpe na-enweghị eriri. Ahụmịhe magnetik na-emetụta naanị iPhone 12 mini / 12/12 Pro / 12 Pro Max. Na-enweghị okwu mmachi magnetik, ekwentị na-enweghị Mag-Nche agaghị akwado njirimara magnet.
Nchedo na Nchedo
Magnetik Ikuku chaja nwere ọgụgụ isi nchebe technology inye okpomọkụ akara, overvoltage na overcurrent nchedo, obere circuit nchedo, na mba ọzọ ihe nchọpụta. Mee ka ekwentị gị nọrọ jụụ ma dịkwa nchebe ka ị na-akwụ ụgwọ
Ntinye gosiri 5W / 7.5W / 10W / 15W
Ugbu a 1000mA @ 1100mA @ 1250mA
Ugboro 127.7kHZ ± 6HZ
Ngwaọrụ akwadoro 5W / 7.5W maka iPhone, 10W / EPP15W maka Samsung
Nchedo SCP, OTP, OCP, OVP
Akwụkwọ OA / ROHS / FCC
Nke gara aga: Clear Magnetik Liquid Silicone Ileba maka iPhone 12 usoro
Osote: Magnetik 2 na 1 Ikuku Nchaji nkwụnye maka iPhone na Airpods
Clear Magnetik Liquid Silicone Ileba maka iPhone ...
Magnetik Liquid Silicone Ileba maka iPhone 12 usoro
Magnetik 2 na 1 Ikuku Nchaji Guzosie maka iPh ...